Wararka - Magaalada Jinjiang Neikeng waxay ku guuleysatay cinwaanka “Magaalada Kabaha Shiinaha, Magaalada Slippers”
Magaalada Jinjiang Neikeng waxay ku guuleysatay cinwaanka “Shiine Shoes Cwaa, Sdibinta Tiska leh ”
Waqti aan fogeyn, ururka maqaar -shiineedka wuxuu dadweynaha ugu dhawaaqay in “magaalada kabaha Shiinaha, magaalada dacasyada” cinwaanka aagga astaamaha ah iska leh Jinjiang Magaalada Neikeng , kaas shaki la'aan dhiirigalin Jinjiang warshadaha dacasyada a lwadnaha. “Sharaf iyo mas’uuliyad ayay u tahay kuwa dadaalay tobanaan sano si ugu dambayn loo aqoonsado. “Kabaha kabaha yar -yar ee adduunka weyn,Jinjiang warshadaha kabaha ayaa ka faa'iideysan doona fursadan si kor loogu qaado qaab dhismeedka warshadaha, kor loogu qaado maalgashiga sayniska iyo farsamada, iyo kor u qaadista Jinjiang dacas warshadaha si loo sii ballaadhiyo oo kor loogu qaado. ” Kani waa codka la isku raacsan yahay ee warshadaha.
Maxaa soo jiidasho leh Jinjiang Magaalada Neikeng waa inay gaaraan sharafkan ? Iyo sidee yeeli doontaa Jinjiang warshadaha kabaha samayn “Geed duug ah(warshadaha wax soo saarka dhaqameed)”Furan“ ubax cusub(casriyeyn cusub)“? Oo sidee ahaan doontaa “Magaalada kabaha kabaha ee Shiinaha -Neikeng”Shaqaalaha la xiriira kooxda qiimeynta iyo Jinjiang indha -indheeyayaasha warshadaha dacwadaha Jinjiang warshadaha kabaha?
Maxaa soo jiidasho leh Jinjiang Magaalada Neikeng waa inay gaaraan sharafkan ?
“Magaalada Kabaha Shiinaha iyo magaalada Slippers” oo ah cilaaqaad gobol oo lagu yaqaan, kani waa Jinjiang ka dib "magaalada kabaha Shiinaha", "magaalada dharka firaaqada ee Shiinaha", "magaalada jiinyeerka ee Shiinaha", "magaalada warshadaha dabaasha ee Shiinaha", sharaf kale oo ah "summad qaran".
Sida laga soo xigtay kooxda qiimaynta, “saamayn cluster cad, silsilad warshadeed oo dhammaystiran” ayaa ah qodobka ugu muhiimsan Jinjiang si aad ugu guulaysato kaalmaha sare.
Jinjiang magaaladu waa safka hore ee gobolka Fujian si loo dhiso aagga dhaqaalaha ee xeebta galbeed ee Marinka. Waa gobolka iyo magaalada oo leh awoodda ugu ballaaran ee Gobolka Fujian, iyo sidoo kale mid ka mid ah gobollada iyo magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan Shiinaha. Waxay soo uruurisay koox kooxeedyo warshadeed oo caadi ah oo leh dhaqaalaha gaarka loo leeyahay sida jirka ugu weyn, sida kabaha tolidda, dharka iyo dharka, dhoobada dhismaha, cuntada iyo cabitaanka, dalladda iyo alaabta carruurtu ku ciyaarto. Qofka ay khuseyso ee mas'uulka ka ah magaalada Neikeng ayaa soo bandhigay in 40 -kii sano ee la soo dhaafay ee dib -u -habaynta iyo furitaanka, Neikeng ay samaysay qaab horumarineed oo ah "kabaha bari iyo galabta galbeed", kabaha dacasuna ay noqdeen warshad tiir dhaqameed. Tan iyo 1980, gudahaMagaalada Neikeng dacas-kabuhu waxay soo mareen waddo aan caadi ahayn laga soo bilaabo madmadowga ilaa sumcadda caalamka, waxayna si tartiib tartiib ah u sameeyeen koox warshadeed oo baaxad leh. “Magaca 'Kabaha Shiinaha ee Cagodkaal · Magaalada caanka ah ee loo yaqaan 'Slippers' waa inay fiiro gaar ah u yeelato qaybta kabaha oo kor u qaaddo horumarka wanaagsan ee qaybtan ''.
“70 -kii iyo 80 -kii ilbiriqsi ee kabaha kabaha Magaalada Neikeng waxaa inta badan lagu iibiyaa suuqa gudaha, si loo dardargeliyo horumarinta shirkadaha gaarka loo leeyahay 90 -meeyadii, shirkado badan oo ka qayb -qaata carwada Canton, the Magaalada Neikeng dacasayaashii waxay amarkooda ku bilaabeen shirkad ganacsi oo ajnabi ah, shirkaddii dambe afkeeda keydad furan oo adduunka oo dhan ah, tani runtii waxay keentay Magaalada Neikeng dacasyada adduunka oo dhan. ” InMagaalada Neikeng ee jiilkii hore ee soo -saareyaasha kabaha, Mr. Zhang ayaa soo xusuustay, sidoo kale wakhtigaas, ee Magaalada Neikeng sibidhka warshadaha si loo sii balaadhiyo, tirada ganacsiyada oo sii kordhaya, goob barwaaqo ah, oo laga sameeyay Magaalada Neikeng slippers ganacsiga shisheeye inta badan, waxaa kaabaya iibinta gudaha ee sifo weyn.
Ka dib 40 sano oo horumar ah, the Magaalada Neikeng slippers ayaa si tartiib tartiib ah uga soo baxay qaabkii waxsoosaarka aqalada, si wada jir ah ula socoshada, laga soo bilaabo naqshadeynta, horumarinta, wax soo saarka caaryada, sahayda alaabta ceyriinka ah ee wax soo saarka, baakadaha, suuqgeynta, ganacsiga, saadka iyo wixii la mid ah isku xirka silsiladda warshadaha oo dhameystiran, qaybinta xirfadeed ee shaqada oo dhammaystiran ayaa cad, awoodda iskaashigu waa mid aad u fiican, baaxadda ayaa si aan kala go 'lahayn u fidaysa.
Waxaa la soo wariyay inay jiraan in ka badan 590 shirkadood oo dacas ah oo diiwaangashan Jinjiang, oo leh wax soo saar sanadle ah oo ka badan 700 milyan oo lammaane iyo wadarta qiimaha wax soo saarka oo ka badan 10 bilyan yuan. Iyaga dhexdooda, qiimaha wax soo saarka ee in kabadan 100 milyan oo shirkado yuan ah, 22 shirkadood, qiimaha wax soo saarka ee in kabadan 5 bilyan yuan sanadkii 2017, badeecooyinka waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Vietnam, Filibiin, Hindiya, Koonfur Afrika, Galbeedka Yurub, Bariga Dhexe iyo gobollada kale, waa saldhig wax soo saar oo kabuubyo qaran oo muhiim ah.
“Aqoonsiga Jinjiang Magaalada kabaha ee Neikeng ma aha oo kaliya aqoonsiga horumarinta warshadaha kabaha siibanka tobankii sano ee la soo dhaafay, laakiin sidoo kale waa bar bilow cusub u ah horumarinta warshadaha. Iyada oo ku saleysan magaalada dacasyada caanka ah, beerista qoto dheer iyo shaqo taxaddar leh, heerarka adag iyo shuruudaha sare, gudahaMagaalada Neikeng Warshadaha dacasyada ayaa hubaal ah inay ka bixi karaan badeecooyin caan ah iyo shirkado caan ah iyo magaalooyinka waddada kutlada warshadaha. ” “Ayuu yiri Wang Wenqi, oo madax ka ah Machadka Cilmi -baarista Warshadaha Hargaha iyo Kabaha ee Shiinaha (Jinjiang) Co., LTD.
Sidee yeeli doontaa Jinjiang warshadaha kabaha samayn “Geed hore” oo furan “ubax cusub”?
Sharafta “Magaalada Kabaha iyo magaalada caanka ah ee kabaha dacarta ee Shiinaha” waxay kalsooni siisaa shirkadaha warshadaha sibidhka, laakiin sidoo kale waxay ka dhigtaa inay gartaan baahida iyo deg -degga isbeddelka iyo kor u qaadista. Lama dafiri karo,Jinjiang Magaalada Neikeng warshadaha siibashada ayaa sidoo kale wajaheysa aagag kale oo waxsoosaarka siibashada siilka sida tartanka isku -dhafan, dagaalka qiimaha, isu -uruurinta caaryada, fowdada nidaamka shaqada iyo dhibaatooyin kale oo la mid ah, Jinjiang Magaalada Neikeng warshadaha siibashada sida loo “geed duug ah” u furo “ubax cusub”?
Dr. Qin Ge, oo ah shuraako ka tirsan hayadda gaarka loo leeyahay ee booqday gudaha Magaalada Neikeng ganacsiga kabaha, ayaa u sheegay wariyeyaasha in marka la barbar dhigo Brazil iyo kabo sibidhka leh oo kale, gudaha Magaalada Neikeng warshadaha dacasku waxay leeyihiin meel ballaadhan oo horumarineed. “GudahaMagaalada Neikeng Shirkadaha dacasku waa yar yihiin oo way kala firdhaan, la'aanta shirkado hormuud u ah gobolka, iyo saamaynta gardarraynta warshadaha si buuxda looma muujiyo. Intaa waxaa dheer, weli waxaa jira boos badan oo lagu hagaajin karo hawlgalka astaanta, fikirka naqshadeynta iyo maareynta. ”
Shirkado badan oo siibasho ah laftooda ayaa iyaguna raadinaya qaab horumarineed oo cusub. Tusaale ahaan,qaar kabo shirkadaha wuxuu ku adkeysanayaa r & d iyo hal -abuurka alaabta ceeriin, wuxuu hagaajiyaa tikniyoolajiyadda wuxuuna si joogto ah u beddelaa waxqabadka alaabta ceyriinka ah ee PVC, taasoo si weyn u yareyneysa qiimaha meheradda. Raaxada, ilaalinta iyo jilicsanaanta dacasyada ay soo saaraan alaabteeda ceeriin waxaa aqoonsaday suuqa. qaar kabo ganacsis yihiin si ay u qabsadaan suuqa iyo teknoolojiyadda heer-sare ah, oo diiradda saaraya kabaha sare ee dibadda, hal-abuurka badeecadda oo dhiirran, hagaajinta farsamada iyo cusboonaysiinta qalabka, oo ka baxsan waddo horumarineed oo gaar ah; Dhanka kale,qaar kabo shirkadaha wuxuu xooga saaray sidii loo xakamayn lahaa isku xirka iibka iyo hawlgalka wanaagsan ee lacagaha. Waxay ku adkaysanaysaa macaamil lacag caddaan ah, waxay gaadhaysaa “iibso hoose oo iibso qiimo jaban”, waxay ku iibsataa alaabta ceyriin qiimo jaban, waxay ku iibisaa kabo dhammeystiran qiimo ka hooseeya suuqa, waxayna ku jirtaa faa iidada qiimaha marka laga hadlayo macaash waxayna qabataa tartan caafimaad qaba.
Neikeng slippers Enterprises waxay kaloo ogaadaan in shirkaduhu "kaligood tagaan", "hal qof oo dunida ku socda", kaliya dhowr shirkadood oo kala jaba warshadaha ma keeni karaan isbeddel weyn. Sida loo kala jebiyo? Sidaa darteed,Jinjiang isdhexgalka dawladda iyo meheradda, horumarinta kooxda ganacsiga, si looga baxo xaaladda cusub ee warshadaha.
Si loo horumariyo warshadaha kabaha, Neikeng Town ayaa sidoo kale soo bandhigtay hirgalinta dhammaystiran ee mashruuca “lixda koobaad”, kuwaas oo ah in la dhiso beerta warshadaha, si loo dhiso suuq xirfadeed, in la dhiso goob Internet ah, in la dhiso koox saldhigyo cilmi -baaris cilmiyeed ah, si loo dhiso koox hormuud ah shirkadaha, si ay u dhisaan koox alaabo caan ah, Oo sahamiyaan hirgelinta “horumarinta + saldhigga wax soo saarka + suuqa xirfadeed” habka horumarinta.
Kooxda qiimaynta: Jinjiang kabuubyadu waxay leeyihiin faa'iidooyin tartan suuqa ah
“Kooxda qiimayntu way rumaysan tahay taas Nmagaalada eikeng ee Jinjiang ayaa iftiimisay faa'iidooyinkeeda warshadaha siibashada, oo leh silsilad warshadeed oo dhammaystiran iyo jawi horumarineed oo si joogto ah loo hagaajiyay. Dadaallada wadajirka ah ee dowladda, ururrada warshadaha iyo shirkadaha, Magaalada Neikeng waxay u noqotay mid ka mid ah saldhigyada wax -soo -saarka siibashada ee ugu weyn Shiinaha. ” Kani waa qiimaynta guud eeJinjiang gudaha Magaalada Neikeng ay bixiyeen kooxda qiimayntu booqashooyin, baadhitaanno, baadhitaanno, shirar, wada -hadal iyo xiriirro kale.
Wariye ku jira heerarka qiimeynta qeybta martida loo yahay, Jinjiang dacasyada faa'iidooyinka qaranka, iyo sidoo kale horumarinta Jinjiang talooyinka warshadaha dacasyada iyo arrimo kale, hoggaamiyaha kooxda ee Fxoghayaha ururka warshadaha kabaha ee gobolka ujian xog -hayaha guud ee Li Jun.
Jinjiang Wararka dhaqaalaha: dhinacyadee ayay kooxda qiimeyntu inta badan qiimeeyaan Jinjiang dacasyada?
Li Jun: Kutlada warshaduhu waxay tilmaamaysaa isku -darka shirkado badan iyo unugyo la xiriira oo leh astaamo gaar ah aag gaar ah, oo leh saameyn baaxad leh, shaqooyin dhammaystiran iyo adeegyo dhammaystiran. Waxaan ahmiyadda ugu weyn siinnaa baaxadda dhaqaalaha iyo horumarka guud ee warshadaha. Qaab dhismeedka silsiladda warshadaha eeJinjiang Gudaha Magaalada Neikeng, saamiga suuqa ee badeecadaha gudaha iyo dibaddaba, dhismaha madal adeegga dadweynaha iyo cabbirro kale ayaa iyaguna ku jira baaxadda qiimeyntayada.
Dabcan, warshad u leh horumar waara, warshadeeda, hal-abuurka ganacsi iyo horumar, sumad tayo leh, wax-soo-saar caqli leh, soo-saaridda kutlada, wax-soo-saarka adeegga, tababarka shaqaalaha, casriyeynta warshadaha, is-dhexgalka magaalada-warshadaha iyo dhinacyada kale ee xaaladda, waxaan sidoo kale qiimeyn doonnaa mustaqbalka wakhti ayaa la filan karaa. Hadda,Nwarshadaha kabaha kabaha eikeng ayaa asal ahaan sameeyay sideed faaiido, sida cabirka, badeecadaha, gaadiidka gobolka, farsamada, sumadda, suuqa, ilaalinta deegaanka iyo hal -abuurka. Waxaa la rumeysan yahay in shaqo qoto dheer oo taxaddar leh oo joogto ah ay u horseedi karto kutlad warshadeed oo leh alaabooyin caan ah, shirkado caan ah iyo magaalooyin caan ah.
Jinjiang Wararka Dhaqaalaha: marka la barbardhigo meelaha kale ee laga siibto simbiriirixda ee Shiinaha, waa maxay astaamaha iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin Jinjiang simbiriirix leh?
Li Jun: Sifada ugu weyn ee Jinjiang dacasku waa in alaabtu hodan ku tahay naqshadeynta, kala duwanaanta iyo tayada. Badeecaduhu waxay noqon karaan Japan, Yurub qaar ka mid ah macaamiisha ayaa jecel, waxay muujineysaa taasJinjiang Alaabta dacasku waxay leeyihiin faa'iido iyo tartan gaar ah. Dabcan, faa'iidadani sidoo kale waa tan ugu badan ee ay tahay inay u dooddo xilligan. Shirkaduhu waa inay soo saaraan badeecooyin wanaagsan, badeecooyin xasaasi ah, badeecado heerkoodu sarreeyo, si ay u beddelaan aragtida hoose ee asalka u ah wax soo saarka Shiinaha.
Sannadkii 1998, Jinjiang waxaa loogu magac daray “Shoe Cagodkaal of China ”, oo leh tikniyoolajiyad samaynta kabaha oo qumman iyo silsilad warshadeed, taas oo ah qodobka ugu muhiimsan ee Ururka Maqaarka ee Shiinaha uu u qaadanaayo horumarka mustaqbalka Jinjiang warshadaha siibashada, tanina sidoo kale waa faaiidada meelaha kale ee kabaha siibiyuhu aanay lahayn. Isla markaana,Mdadka innan waxay jecel yihiin inay dagaallamaan oo ku dhiiradaan inay ku guuleystaan ​​ruuxa ayaa ku qoto dheer dhuuxa lafta, waa qiimo, waxaan aaminsanahay in jiritaanka ruuxaan, Jinjiang warshadaha dacasku waxay na siin karaan waxyaalo yaab leh.
Jinjiang Wararka Dhaqaalaha: Maxay yihiin talooyinka ay kooxda qiimeyntu u hayaan horumarka mustaqbalka ee Jinjiang warshadaha siibashada?
Li: badeecaddu weli waa aasaaska wax walba, oo aan laga sooci karin cilmi -baarista iyo horumarinta iyo naqshadeynta alaabta, waxaana rajaynayaa Jinjiang warshadaha kabaha ayaa kordhin kara maalgashiga cilmi baarista iyo horumarinta badeecada, iyada oo loo marayo qalabka cusub ee shaqeynaya, tikniyoolajiyadda cusub iyo hal -abuurka, kor u qaadida qiimaha asaasiga ah ee alaabta, xoojinta dhismaha kooxda naqshadeynta, hordhaca ama tababarka kartida naqshadeynta xirfadda, kordhinta isticmaalka ilaha naqshadeynta ee habboon.
Kaliya horumar cagaaran oo waara ayaa u keeni kara wax -soosaar cusub warshadaha. Jinjiang warshadaha siibatadu waxay u baahan yihiin inay dedejiyaan dhismaha nidaamka jaangoynta, xoojiyaan xakamaynta tayada alaabta, si joogto ah u hagaajiyaan nidaamka wax -soo -saarka cagaaran, iyo inay abuuraan silsilad warshadeedka wax -soo -saarka cagaaran. Isla markaana,Jinjiang waxay dardargelin kartaa qorshaynta jardiinooyinka warshadaha ee dacasyada, waxay sii dardargelinaysaa isbeddelka warshadaha iyo kor u qaadisteeda, waxayna si firfircoon kor ugu qaadaysaa hagaajinta qaab -dhismeedka warshadaha.